Binance - Funda ukuRhweba
£ 1 IComposit
I-Binance ikhule ngokucacileyo ukusukela oko yasekwayo ngo-2017 kwaye ngoku yenye, ukuba ayingowona mkhulu utshintshiselwano ngee-cryptocur lwemali kwintengiso.
Trading Platform Iplatifomu yokuThengisa esekwe kwiWebhu, usetyenziso lweSelfowuni
Ukutshintshiselana ngeBinance ngokungathandabuzekiyo kukumkani phakathi kwe2018 cryptocurrency. I-Binance ngokungaguquguqukiyo lolona tshintshiselwano lukhulu emhlabeni, ngevolumu yeeyure ezingama-24, kwaye nangaliphi na ixesha ingqekembe yemali yongezwa eqongeni, unokubheja ukuba ixabiso liza kuthi liphindwe kabini. I-Binance yakhula ngokukhawuleza ngo-2017, kodwa ayizange iphazamise naxa imfuno yayinkulu. Ihlala ngexabiso eliphantsi, inokuthenjwa, kwaye iyasebenziseka, kunye nezinto ezintsha eziyinyani kwikhredithi yayo. I-Binance ayilulo utshintsho olululo kuyo yonke injongo, kodwa idlula kulindelo kuninzi.
Indawo yesithathu ye-sophistiqué
Izibonelelo ezizodwa zigalela i-VIP
Umxhasi wenkonzo egqwesileyo
$160 Idiphozithi encinci
Kunzima ukukholelwa ukuba iBinance yasekwa ngaphantsi konyaka omnye ngaphambi kokubhalwa: Julayi 2017. IBinance yasekwa liqela elinamava amaninzi kurhwebo oluphindaphindiweyo kwiimarike eziqhelekileyo, kunye neeasethi zedijithali kwindawo ye-blockchain. Inkampani ivuselele ngokukhupha eyayo ingqekembe (iBinance Coin - BNB) kunye neqonga, ukusetyenziswa kwalo okunelungelo kumnini kurhwebo ngezaphulelo.
Imodeli ibibetha, kwaye i-BNB idumbile ngexabiso. Ngokukhawuleza uBinance wongeze iinketho ezintsha zokurhweba nge-cryptocurrency, kubandakanya uluntu lwalo kuwo onke amanyathelo. Namhlanje, umfutho wabo awucothanga, kwaye iBinance isenokuhlala ingoyena tshintsho lunempembelelo emhlabeni kangangexesha elithile elizayo -nanjengoko inkampani isukile eHong Kong yaya eMalta ukuze ifumane ummiselo wobungani.
Izibonelelo zeBinance kunye neeNzuzo
Ixabiso lokurhweba ngexabiso eliphezulu (BNB)
Iitoni zemali zokurhweba
Ukufikelela kwihlabathi liphela
Iindawo zokurhweba zinokuba ngcono
Akukho app inikezelweyo
Iimali zedijithali ezixhaswe nguBinance zininzi kakhulu ukuba zingabizwa. Eyona idumileyo ukusuka ngo-6/12/18 zezi:
Bitcoin, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, IChinance Coin, Bitcoin Cash, Skycoin, Quarkchain, Ontology, Tron, Loom Network, Aeron, Cardano, Litecoin, Stellar Lumens, IoTex, RipplesIiCyberMiles, IOTA, ICON, Nano, kunye NEO
Zininzi ezinye iingqekembe zemali, zonke ezi okungenani zinamawaka amawaka eedola kumthamo wokuthengisa wemihla ngemihla. I-Binance ihlala ivumela abasebenzisi ukuba bavote kwinto entsha yokongeza kuluhlu, kwaye benze ukujongana nezinye iiprojekthi ukongeza ingqekembe yabo. Ngokuka-CEO u-Changpeng Zhao, iinkampani ezintsha ezingaphezu kwe-1,000 XNUMX zizama ukuba iinkozo zemali zidweliswe kwi-Binance. Akucaci ukuba zingaphi ezi zinto ziya kongezelelwa ngenye imini.
Isifundo: Indlela yokuBhalisa kunye noRhwebo ngeBinance
Ukutyikitya kunye neBinance ngumoya ovuthuzayo. Yiya nje kwisiza, ubanike i-imeyile kunye negama lokugqitha elitsha, kwaye ulinde i-imeyile yokuqinisekisa ukuba ifike ngomzuzu nje omnye okanye njalo.
Cofa kwikhonkco lokuqinisekisa kwi-imeyile oyifumeneyo. Buyela umva kwisiza kwaye usete uQinisekiso lweFactor 2, oluya kukunika ukhuseleko ngakumbi kunephasiwedi yodwa. Nje ukuba ungene ngaphakathi kwesiza, uya kuba nakho ukwandisa imida yokuthengisa ngokunika i-Binance i-ID kunye nobungqina beenkcukacha zedilesi abazicelayo, ukuzalisekisa i-KYC (yazi umthengi wakho) imigaqo evela kwizizwe ezahlukeneyo. Uya kucelwa ukuba unikezele ngomfanekiso wobuso bakho kunye nala maxwebhu mabini. Oku kungqina ukuba ungubani wena uthi ungubani, oku kunceda iBinance ukuthintela ubuqhetseba kunye nokuxhaphaza imali ekubeni babekho kwiqonga labo.
Imali kunye nokurhoxiswa kwemali:
Iidipozithi zenziwa kwii-cryptocurrensets kuphela. Uya kuba nesipaji esizinikeleyo kwi-cryptocurrency nganye exhaswa liqonga. Iidipozithi zenziwa ngokufaka idilesi yakho yesipaji seBinance kwidilesi yakho yesipaji sangaphandle kwaye uthumele imali ngaloo ndlela. Ukurhoxiswa kwenzelwa umva, ngokubeka idilesi yesipaji sakho somntu wesithathu kumgca oceliweyo kwifom yeBinance Thumela. Zininzi iividiyo ze-YouTube ezibonisa le nkqubo ukuba uyabhideka. Sukuthumela imali ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba uyenza kakuhle. Ungasoloko uthumela isixa esincinci kakhulu kuqala ukuba uqiniseke ukuba unayo i-hang kuyo ngaphambi kokuthumela ibhalansi epheleleyo.
Indlela yokuThenga / ukuRhweba:
Sebenzisa amaQonga aQalayo okanye amaQonga aPhambili, uya kuba nakho ukukhetha iBitcoin, i-Ethereum, iBinance Coin, okanye iTether njengemali esisiseko yorhwebo. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ubeke enye yezi mali ngaphambi kokuba ukwazi ukurhweba nayo. Nje ukuba ukhethe imali yakho, uya kubona zonke iiperi zokurhweba ezikhoyo ngale mali isisiseko. Khetha enye oyifunayo, kwaye wenze umda wokuyalela (ukhetha ixabiso), iodolo yentengiso (ixabiso ligcwaliselwe wena ngokusekwe kuyo nayiphi na into ekhoyo ngoku), okanye i-stop-limit order (ukhetha ixabiso kuya kubangela ukuthengiswa okanye ukuthengwa ngokusekelwe kwisenzo esithile sexabiso). Nje ukuba wenze intlawulo yakho, iimali zakho ezintsha kufuneka zibekhona kwisipaji sakho seBinance ngemizuzu okanye imizuzwana.
Uyigcina njani i-Cryptocurrency yakho eNtsha:
Ungaze ugcine i-cryptocurrency yexesha elide kutshintshiselwano obukade uyithenga. IiHacks zenzeka kutshintshiselwano nge-crypto ngalo lonke ixesha, kwaye abantu abagcina imali yabo apho bahlala belahlekelwa yiyo kungekho themba lokuphola. Nangona oku kungazange kwenzeke kuBinance, oku akuthethi ukuba ngekhe kwenzeke. Ukunciphisa umngcipheko, hambisa iingqekembe zemali zakho kwisipaji sesoftware kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo, okanye kwisipaji sehadiwe njengeLedger Nano S. Ukujonga iqela lezikhethi ezikumgangatho ophezulu, jonga ezona phepha zintle zeBitcoin.
Iqonga lokuthengisa iBinance
I-Binance ibonelela ngeendlela ezimbini zokuthengisa, "ezisisiseko" kunye ne "Advanced". Umahluko ophambili kukubonakala, kunye nokubonwa kobuchwephesha obunzulu ngakumbi kuhlobo oluPhambili. Nokuba iteration yeqonga lokuthengisa laseBinance alinantlonelo ngokwenene kubasebenzisi abatsha, kodwa zombini zisebenza ngokugqibeleleyo. Abasebenzisi banokwenza iMida, iMarike, kunye neeNdawo zoku-Limisa ii-odolo kuzo zombini iinguqulelo zeqonga. Ukunyaniseka, asicingi ukuba nayiphi na inguqulelo yeqonga kunzima kakhulu ukuyisebenzisa kunenye, kodwa umsebenzisi ngokungathandabuzekiyo unokukhetha nangayiphi na indlela.
iilwimi: IsiNgesi, iSpanish, isiFrentshi, isiJamani, isiTurkish, isiPolish, isiPhuthukezi, isiTaliyane, isiDatshi, isiTshayina, isiArabhu
Iindlela Deposit: Iidijithali zemali
I-Binance ekuqaleni yayilawulwa yimibutho yezemali e-Hong Kong, kwaye yachaphazeleka ngokuthe ngqo / ngokungathanga ngqo yi-2017 "yokuvalwa" kotshintshiselwano lwasekhaya. IHong Kong yayingeyonyani, iipesenti ezili-100 ngaphakathi kokubona urhulumente waseTshayina, kodwa ikamva likaBinance lahlala lingaqinisekanga. Njengoko ukufikelela kweBinance kwamazwe aphesheya kwandisiwe eMpuma naseNtshona, imiqobo yolawulo evela eJapan naseMelika, kunye nokuqhubeka nokungaqiniseki ekhaya, kukhuthaze uBinance ukuba afudukele eMalta, "kwisiQithi seBlockchain".
Apha, isakhelo solawulo sibonakalisa ukuba nobuhlobo ngakumbi kwi-Binance, kwaye iinkampani ezinje ngezi ziyonwabela ubudlelwane obunokubambisana nabalawuli, ngokudibeneyo ukuseka iiparameter ezivumela ukwenziwa kwezinto ezintsha, ngelixa zithintela iingxaki ezinokubakho kwi-bud. Ukuvela kwale meko intsha yolawulo akukabonakali.
Ngokuphathelele ukhuseleko lomsebenzisi, i-Binance icingelwa ukuba ikhuseleke kakhulu kunaniselwano, kwaye kusafuneka ihlupheke kuhlaselo olubalulekileyo okanye ilahleko yeemali zomsebenzisi. Ewe kunjalo, akukho tshintshiselwano luhlala lukhuselekile nge-100%, kodwa kwihlabathi eliphambili elinamawaka ezigidi zeasethi engamanzi ekhuselweyo ngaphakathi, iBinance yenze ngokuncomekayo.
Imirhumo yeBinance kunye neMida
Ubume bemirhumo ye-Binance yeyona nto inomdla kakhulu ngeqonga. Lonke urhwebo luhlawuliswa ikhomishini ye-0.10%. Xa abasebenzisi behlawula nge-Binance's BNB, loo mali iyanqunyulwa kwisiqingatha: i-0.05% kuyo yonke imisebenzi. Eli lelona xabiso lisezantsi lokurhweba oza kulifumana, ngaphandle kotshintshiselwano olunikezela ngorhwebo lwasimahla.
Iidipozithi zazo zonke iimali zisimahla. Ukurhoxiswa kuhlawuliswa ngamaxabiso ahlukeneyo kuxhomekeke kwingqekembe, uyabona Imirhumo yokurhoxa kukaBinance apha.
Iindlela zokuhlawula iBinance
I-Binance ivumela abasebenzisi ukuba bahlawule ii-altcoins besebenzisa iBitcoin, i-Ethereum, iBinance Coin, kunye neTether. Akukho okunye "ukurhweba phakathi" kwee-altcoins okwangoku. I-Binance ayamkeli iintlawulo ze-fiat, kwaye ngokucacileyo ayinazicwangciso zokwenza njalo nangaliphi na ixesha kungekudala. Umthwalo olawulayo uza kuba nzima, kwaye uBinance uhlala nje kwikhaya labo elitsha eMalta. Ngomsebenzi womsebenzisi ongu- # 1 kwintengiso, iBinance ibonakala ngathi yenza kakuhle ngaphandle kwe-fiat.
Inkxaso yoMthengi yeBinance
Njengolunye utshintsho oluninzi, iBinance yamkela izicelo zenkonzo yabathengi nge-imeyile. Ngaphambi kokuthatha isicelo sakho, iBinance ikubonisa uluhlu lwemibuzo eqhelekileyo kunye nezisombululo zayo, ngethemba lokuba uyakuyifumana indlela yokusombulula ingxaki yakho. Ukuba ugqiba ukuthumela isicelo sakho, inkonzo ye-Binance yabathengi (ngamava ethu) iyaphendula kwaye iluncedo.
Iimpawu eziBodwa zeBinance
Akukho nkalo yeBinance eyahlukileyo ngokwenyani (akusekho), kodwa utshintshiselwano lumi lodwa njengokudityaniswa kweempawu ezininzi ezomeleleyo, kunye nezinto ezintsha eziye zakhutshelwa ngokubanzi kangangokuba azisabonakali ngathi zintsha.
Eyona nto inomdla kakhulu kwiBinance, kusetyenziso oluqhelekileyo, yiBinance Coin BNB. Le ngqekembe ibuyise ngaphezulu kwe-1000% ukusukela kwi-ICO. Inexabiso layo kwimarike ebanzi kwaye ithengiswa ngabatyali mali kunye nabasebenzisi beBinance ngokufanayo. I-BNB ikhutshelwe lolunye utshintshiselwano olunje ngeKuCoin, kodwa akukho lunye utshintshiselwano olubonileyo ukuba imali yabo yokubambisa isetyenziswa ngokubanzi kwilizwe liphela.
Elinye icandelo lamava eBinance anokuthiwa awodwa lukhetho olukhulu lweeprojekthi ezikumgangatho ophezulu ezikhoyo zokuthengisa kwiBinance. Olunye unaniselwano oluninzi lunenani (iitoni kunye neetoni ze-cryptocurrensets), kodwa bambalwa abayithelekisa nomgangatho (abanalo iqela leengqekembe ezifileyo ezingenamthamo wemihla ngemihla uvale iqonga) njengoBinance. Oku kuvumela abasebenzisi beenkozo zemali ezingacacanga ukuba babe neqonga lokuthengisa elinokuthenjwa. Utshintshiselwano oluninzi lwe-Cryptocurrency.
Njani uBinance ngokuthelekisa kubarhwebi nakwezinye iintengiselwano
I-Binance kunye ne-eToro zizinto ezimbini ezahlukeneyo, ezineziseko zabathengi ezahlukeneyo (ngaphandle kwendlela yokuhamba esebenzisa zombini iqonga lamandla abo). I-Binance ithengisa i-cryptocurrencies isebenzisa iindlela esele sithethile ngazo. I-eToro ayithengisi i-cryptocurrensets kwaphela. Endaweni yokuba ivumele abasebenzisi ukuba batyale imali kwi-crypto ngesithintelo esisezantsi kakhulu sokungena.
Uyabona, ngobunini bendabuko beempahla zedijithali, abasebenzisi kufuneka badlulise kwaye bagcine iimali zabo bebodwa, besebenzisa izipaji zedijithali ezenziwe ngabantu besithathu, nangokusebenzisa iinkqubo ezintsonkothileyo kunye needilesi (ukuba umsebenzisi uzisusile) ziya kukhokelela ukulahleka kwemali. I-eToro ayisebenzisi nayiphi na kwezi nkqubo. Endaweni yokuthengisa i-crypto, bathengisa ii-CFDs.
I-CFD sisivumelwano somahluko. Umsebenzisi ubhatala ixabiso lentengiso enye ye-10 yeedigital zemali (zonke iiprojekthi ezomeleleyo njenge-NEO, i-EOS, iBitcoin, kunye neStellar Lumens). Endaweni yokuba le mali idluliselwe kwisipaji, iimali zomsebenzisi zitshixelwe kwikhontrakthi emele elo xabiso le-crypto. Umsebenzisi unokurhoxisa ikhontrakthi nangaliphi na ixesha, kunye neziphumo ezahlukeneyo zokubeka ixesha.
Ukuba ixabiso lokubamba liphezulu xa ikhontrakthi irhoxisiwe, umsebenzisi wenza ibhalansi njengenzuzo, kunye nentsalela yesivumelwano esivulwa ngokuvalwa kweakhawunti. Ukuba ixabiso liphantsi xa iakhawunti icinyiwe, umahluko utsaliwe kwi-balance esele ivuliwe.
Ngokusisiseko, oku kuvumela abasebenzisi ukuba batyale imali kwi-cryptocurrency ngaphandle kwentloko yobunini. Ngoku, ukuba ufuna ukuthenga i-cryptocur lwemali ukuze uyisebenzise- hayi ukutyala imali- i-eToro ayisiyiyo eyona ndlela ikulungeleyo. Kodwa ukuba ufuna ukuthelekelela kwixabiso, i-eToro iya kukunika ukuhamba ngokulula kwayo, xa kuthelekiswa neBinance. I-Binance, kwelinye icala, ikunika iindlela ezininzi zokurhweba, kwaye uninzi lweemali ezininzi zokutyala imali. Leliphi iqonga olikhethayo liya kuxhomekeka ngokupheleleyo kwiimfuno zakho kunye nezinto ozikhethayo. Olunye utshintshiselwano ngeeDijithali zemali.
Isiphelo: Ngaba iBinance ikhuselekile?
Ekupheleni kosuku, kufuneka sivume ukuba siyayithanda iBinance kancinci. Liqonga lokurhweba elibonisa ngokupheleleyo elinika abasebenzisi ukufikelela kwii-cryptocurrensets ezininzi (zonke zinomthamo obalulekileyo wezorhwebo) kunaye nawuphi na umboneleli obalulekileyo wezorhwebo. Indawo iza nezinto ezimbalwa ezantsi: ifikeleleke kakhulu, inika abasebenzisi ithuba lotyalo-mali kwi-BNB, ixhasa iitoni zemali, kwaye iyafumaneka kwihlabathi liphela.
Kodwa ngaba iBinance ikhuselekile? Akukho tshintshiselwano nge-imali yedatha ikhuselekile ngokwenyani. Ukhuseleko ayisiyiyo iMO yabo yokugqibela, nangona kunjalo kufuneka bakhuseleke njengoko benakho. Ukutshintshana kuvulwa ngokwabo kwizigidi zabathengi, ezenza ukuba semngciphekweni. Akukho ndlela yenkampani inkulu kangaka, ibambe le mali ininzi, ukuze ingabinayo into ekujolise kuyo ngasemva.
Nangona kunjalo, i-Binance ibonelela ngokhuseleko oluncomekayo kwaye kusafuneka ibone ilahleko enkulu yemali yokuqhekeza. Oku akuthethi ukuba olo hlaselo alunakuze lwenzeke, kodwa uBinance uneqela elimangalisayo elinikezelwe kwimpumelelo kule nkalo. Asilindelanga ukuba izinto zitshintshe nangaliphi na ixesha kungekudala, ke siyakwazi ukucebisa iBinance ngaphandle kokubhukisha. Sebenzisa iqonga njengoko bekucwangcisiwe, kwaye uya kuba nakho ukurhweba ngokuzithemba. Ngethamsanqa kuyo yonke imisebenzi yakho yexesha elizayo!
IsiNgesi, iSpanish, isiFrentshi, isiJamani, isiTurkish, isiPolish, isiPhuthukezi, isiTaliyane, isiDatshi,